November 25, 2021 - ApannPyay Media
အသည်းကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေသော ဆေးနည်း
November 25, 2021 by ApannPyay Media
အသည်းကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေသော ဆေးနည်း အ ရက် အရမ်းသောက် ခဲ့ တဲ့ ညီတစ်ယောက် အခုတော့ အသဲ မှာ အနာဖြစ် လို့ ဆေးရုံ ခဏခဏ တက်နေရပြီ။ ဆေးရုံတက် ဆေးစစ်လိုက်တော့ အသဲကင်ဆာ တဲ့ ။ အ သဲ က င်ဆာဖြစ်နေတဲ့ ညီ အတွက် သူမိသားစု တစ်ခုလုံးက စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေရပြီ တစ်မိသားစုလုံးလည်း မနားရ ဆေးရုံတက်တော့ အစောင့်က နှစ် ယောက်စောင့်ရတယ်။ သွေးသား ဖြစ်နေတော့လည်း ရောဂါပျောက်ရေး ဘယ်ဆေးကောင်းမလည်း စုံစမ်းနေရတာကလည်း တစ်လုပ်။ ဆေး ရုံ က ခွဲစိတ်ကုသလည်း တာဝန်မယူလို့ အိမ် ပြန်ခေါ်လာရတယ် ဗိုက်ကလည်း မနေနိုင်အောင်နာ … Read more
အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်လည်းအပြင်မထွက်တာ ၁ပတ်လောက်ရှိပြီမို့ရှိတာလေးနဲ့လုပ်ပြထားပါတယ် ။ ကြက်ပေါင်းရည်ဆိုတာကြက်ကိုပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အရည်ချိုကိုပြောတာပါ ။ ကြက်သား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ နံနံပင်အမြစ်တို့လိုပါတယ် ကြက်သားကိုရေစင်အောင်ဆေးပါနံနံပင်ရဲ့အမြစ်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပါဂျင်းကိုအခွံခွာပြီး မထူမပါးလြီးပါ ကြက်သွန်ဖြူအမွှာကိုခွာယူပြီး ရေဆေးပါ(အခွံမခွာပါဘူးရှင် အခွံနဲ့တစ်ပါတည်းထည့်ပေါင်းမှာပါ ) ဇောက်နက်တဲ့ပန်းကန်ထဲကိုပန်းကန်လုံးအသေးလေးတစ်လုံးမှောက်ထည့်ပါသူ့အပေါ်မှ ကြက်သား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူနံနံပင် ဖြန့်ပြီးထည့်ပါထမင်းပေါင်းအိုးထဲကို ရေထက်ဝက်ခန့်ထည့်ပြီးအပေါ်ကန့်သုံးကာ ၂နာရီခန့်ပေါင်းပါ အဖုံးမဖွင့်ကြည့်ပါနဲ့ ကြက်ပေါင်းရည်ရဖို့အချိန်၂နာရီကလုံလောက်ပါတယ်ရှင် ကြက်ပေါင်းရည်လိုတာထက်ပိုထွက်ချင်ရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပါရှင် ဇစ်အိတ်လေးတွေထဲ ရေခဲတုံးလေးတွေထည့်ပြီးအိုးအဖုံးပေါ်ကို တင်ပေးပါရှင်ဘယ်အချိန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ အချိန်ပြည့်ဖို့ ၅မိနစ်၁ဝမိနစ်အလိုလောက်မှာလုပ်လို့ရပါတယ် ဘာအရသာမှုန့် ဘာဆားမှမထည့်ပါဘူးကြက်ကတော့ ဗမာကြက်အသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးပါရှင် ။ ကြက်ပေါင်းရည်ထဲမှာအဆီတွေဝေ့နေတာ မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် ကြက်ပေါင်းတဲ့အခါကြက်အရေခွံကိုဖယ်ပြီးပေါင်းပေးပါရှင့် ။ Credit Htun Thiri မူရင်းပိုစ့်ပိုင်ရှင် မမအားcredit ပေးပါသည်။ မှတ်ချက်အရေခွံမချွတ်လျှင် အဆီထွက်ပြီးလည်ချောင်းယားပြီးချောင်းဆိုးတတ်ပါသည်။ အျပင္မွာၾကက္ေပါင္းရည္ဝယ္မရေတာ့ဘူးဆိုလို႔ၾကက္ေပါင္းရည္လုပ္နည္းေလး ျပန္လည္၍ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ ကိုယ္လည္းအျပင္မထြက္တာ ၁ပတ္ေလာက္ရွိၿပီမို႔ရွိတာေလးနဲ႔လုပ္ျပထားပါတယ္ ။ … Read more
ဂျင်းအသုံးပြီး ဝက်ခြံနှင့် အမာရွတ်ကို အပြတ်ရှင်းမယ်
November 25, 2021 November 25, 2021 by ApannPyay Media
ဂျင်းအသုံးပြီး ဝက်ခြံနှင့် အမာရွတ်ကို အပြတ်ရှင်းမယ် ဝက်ခြံ နှင့် အမာရွတ်ကို ရှင်းမယ် ဂျင်းက အစာအိမ်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သလို တခြား ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဆေးတစ်လက် အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလှအပအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါသေး တယ်နော်.မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေနဲ့ အမည်းစက်တွေအတွက် ဂျင်းကိုအသုံးပြုနည်း (၁)ဂျင်းဟာ မျက်နှာပေါ်ကအာရွတ်တွေ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အမာရွတ်ရှိတဲ့ နေရာမှာ ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ကပ်ထားပေးပါ။ ဂျင်းခြောက်သွားတဲ့ထိ ထားပါ။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။လအနည်းငယ်ဆို သိသာပါလိမ့်မယ်။ နည်းလမ်း (၂) ဂျင်းကို တောက်တောက်စဉ်း (သို့) အမှုန့်ကြိတ်ထားတဲ့ ဂျင်းကိုယူပါ။ပြီးရင် သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အနည်းငယ် အရည်ညှစ်ပါ။ ပျားရည်ထည့်ပါ။ သေချာမွှေပြီးရင် မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းပေးပါ။ … Read more
ဆီးအောင့်ထားခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး ယခုတစ်ပတ် ဆွေးနွေးချင်တာက. တော့ဆောင်းတွင်းလည်း ဝင်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီးအောင့်ထားခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး အကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ယခုလို ဆောင်းရာသီကာလ. မှာ ကျန်တော်တို့ လူငယ်အများစု ရော လူကြီးများ ရော ရဲ့ ညဘက် ဆီးသွားခြင်း အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။လူငယ် အမျိူးသားများ ညဘက် ဘီယာသောက်တက်သူများ၊ ရာသီဥတု အေး၍ ရေနွေးသောက် ကြသောလူကြီးသူမ. များအနေဖြင့် ဆီးခဏခဏ. သွားကြပါတယ်။ မအိပ်ခင်အချိန်ထိတော့ ဆီးသွားရတာ ပြသနာ မရှိပေမယ့် အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန် ဆီးသွားချင်လာရင်ထ. ပြီးမသွားကြဘဲ အောင့်ထား တက်ကြပါတယ်။ဆီး ဆိုသည်မှာ ခန္တာကိုယ် ရဲ့ အစိတ်အတောက်များစု ဝေးရါ နေရာပါ။ အညစ်အကြေး များ အဆိပ်အတောက် များဟာစုဝေးနေချိန် ဆီးကို သွားချင်ပါလျှက် … Read more
အစာအိမ်ရောဂါ အတွက် ဆန်ဆေးရေ
ဆရာမလေး စုစုစံ ပြောလာတဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့အတွင်း
ယွန်းယွန်းကြောင့် အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလပြဿနာ စတက်ပီ
အထင်အမြင်လွဲမှား ခံနေရတဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို ချပြလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
မနေ့ညကအုပ်စိုးခန့်တင်ခဲ့တဲ့ My Dayနဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်သား ဘုန်းမင်းနေလတင်တဲ့ My Day လေးအကြောင်း…